Ogaden News Agency (ONA) – Ethiopia oo noqotay Wadanka Afrika ugu Cadaadiska Badan Dhanka Saxafada iyo Mucaradka.
Ethiopia oo noqotay Wadanka Afrika ugu Cadaadiska Badan Dhanka Saxafada iyo Mucaradka.
Posted by ONA Admin	/ November 14, 2011
Midowga Saxafada ayaa waxa uu soo saaray mareeg uu ku sheegayo in Wadanka Ethiopia yahay goobta adduunka ugu cabudhis badan dhanka Saxafada iyo mucaradka. mareegtan ayaa kusoo beegantay waqti ay Taliska Woyanaha TPLF uu xukun ku dhuftay 24 qof kuwaas oo lagu eedeeyay inay argagaxiso yihiin kana soo shidaal qaateen wadanka Dariska ah ee Eritrea. Dadkan ayaa waxaa kamid ah wariyaal iyo Xubno Dowlada Ethiopia kasoo shaqeyay oo masuuliyiin sare ka ahaa ururada mucaradka oo doorashada ka qeyb qaatay.
Dadkan 24 qof waxa kamid ah Duqa magalada Addis ababa Mayor Berhane Nega oo hada ah Gudomiyaha Ginbot 7 kaas oo wadanka laga masaafuriyay wadanka dibadiisana ku sugan. Berhanu nega waxa la xukumay isaga oo ka maqan wadanka xukunka lagu xukumayna waxa uu noqon kara 15 sanno oo xadhig ah ugu yaraan. Waxa kale oo kamid ah dadka la xukumay Andu Alem Arage oo ah isagu nin cad cad oo aad loogu yaqaaney hoggaaminta ururka mucaradka ah. Waxa kale oo isna kamid aha wariye caan ka ah dhulka Ethiopia oo lagu magacabo Iskender Nega.
Madaxweynihii Hore ee wadanka Ethiopia oo isagu qowmiyada Oromada kasoo jeeday Negaaso Gidhaada ayaa ka hadlay xukunkan ay taliska Ethiopia kusoo rogtay dadkaan waxa uuna yiri waa arrin aad loola yaabanyahay ahna wax lagu qoslo. Taliska TPLF waxay isku dayayaan inay dadka afka ka xidhaan oo wax hadla lawaayo taas weeye u jeedadoodu wax loo dulqaadan karona maahan.
Taliska TPLF ayaa cabsi iyo burbur weyn kusoo foodleeyahay wax kasta oo dhaqdhaqaaqana waxa ay u taxabaan xabsiga iyaga oo dajistay sharci qofki aqoonyahan ah ama ummada dantooda ka taliya inay ku xukumaan xukun ay ugu magac dareen argagaxiso islamarkaasna ku eedeya eedeymo aan jirin. Afahayenka TPLF Shimeles ayaa sheegay in qofki dhaqdhaqaaq sameya uu yahay kaliya nin ku xidhan Dowlada Eritrea. Waxa dowladas Eritrea ay siisa ayuu yiri tababaro ay maamulka TPLF waxku yeeleen karaan.
Taliska TPLF oo ah qowmiyad aad u tiro yar oo ah qowmiyada tigrega ayaa 3 million lagu qiyasa shacabkooda waxaana cabsi badan ay ka qabaan qowmiyadaha Oromada inay ku kacdo oo afganbi uga yimado haddii ay u oggoladan in si xor ah ay uga qeyb qaataan dowlada doorashoyin iyo mucaaradkana la fasaxo sidaas awgeed waa in qofki kasta ee isku daya innuu si madax banaan u sameysto olole isbadal waxa loo taxaba xabsi ama horray ayaa laga toogta.
Taliska TPLF ayaa waxa dhanka Ogadeniya kaga socda Daggaalo xoog badan oo Ciidanka ONLF ay ku hayaan sidoo kale dhamaan ururadi mucaaradka ku ahaa sida Axmarada, siyaasiyiinta Oromada iyo qowmiyadaha kale oo dhan ee sida nabada ah ku dagalamayay ayaa hada billaabay olole lagu mijja xaabinayo taliska TPLF.
Dadka siyaasada geeska afrika khaastaan Ethiopia indho indheeyana waxay aad uga walbahaarsanyihiin siyaasad xumada uu ku kacay Kaligi Taliye Zenawi oo hada taliskiisu soo gabagaboobayo. Waxa Dowlada burburaysa lagu garta ayuu yiri nin magacisa aan sheegin oo ku sugan Addis Ababa Ciidanka qalabka sida ee wadan leeyahay iyo shacabka Suuqa ka adeeganaya markii ay isku tiro noqdaan ama ciidanku uga batto suuqa shacabka. Taas waxa ay ka muuqata Addis Ababa oo Ciidan huubeysan ay wado kasta dhoobanyihiin waxaadna daremaysa ayuu yiri cabsi badan iyo ammaan xumo.